Soomaaliya kaalintee ka gashay dalalka ugu horeeya tacadiga ama gaboodfalka haweenka – SBC
Soomaaliya kaalintee ka gashay dalalka ugu horeeya tacadiga ama gaboodfalka haweenka
Warbixin cusub oo shaley shaaca laga qaaday ayaa looga hadley wadamada ugu horeeye ee haweenku ay ka soo wajahado dhibaatooyinka & qataraha, iyadoo wadamadaasi safka hore ay gashay Soomaaliya.
Dalka Afghanistan ayaa kaalinta kowaad ku qabsadey wadamada aduunka ee haweenku ku qabaan kadeedka xaga nolasha ah gaar ahaan colaadaha, daryeel caafimaad la’aan & waliba faqiirnimada ama saboolnimada.
Kaalinta labaad waxaa soo galey wadanka Congo (Ex-Zair), halkaasi oo maalin walba ay ka dhacaan kufsi baahan oo haweenka lagula kaco, iyadoo la soo wariyey in kumaan kun oo haween ah maalin walba si qasab ah oo arxan daro loogu kufsado haween fara badan oo qaarkood aan qaangaar aheyn.
Pakistan ayaa kaalinta sadexaad gashay, waxaase wadanka Hindiya oo ka mid ah wadamada haatan soo koraya ee dunida saameynta ku yeelanaya dhanka siyaasada & dhaqaalaha isla markaana ah wadanka ay ku nool yihiin dadka aduunka ugu badan ee si dimuqraadi ah u codeeya ayaa wuxuu kaga horeeya dhibaatada & gabood falka haweenka lagula kaco dalka Soomaaliya oo aanay ka jirin mudo 21 sano ah dawlad dhexe oo dalka oo dhan ka shaqeysa.
Taasi macnaheedu waxay tahay Hindiya waxay ku jirtaa wadamada kadeeda haweenka kaalinta afaraad, halka Soomaaliya ay ka gashay kaalinta shanaad liiskaasi.
Antonella Notari oo madax ka ah koox u dooda xuquuqaha haweenka oo lagu magacaabo (Women Change Makers) ayaa ka hadashay sababta Afgaanistan ay u tahay meelaha ugu daran ee haweenka la kadeedo.
“Colaada oo sii socota, duqeymaha ciidamada NATO, caadooyinka dhaqanka ayaa ka dhigay Afgaansitan meesha ugu qatarsan ee haweenku ku nool yihiin” ayey tiri Notari.
Antonella waxay kaloo sheegtey in Afgaanistan waxyaabaha ugu waa weyn ee liiskan ka dhigay kan ugu horeeya waxaa ka mid ah, in hadii ay haweenku isku dayaan in ay u hadlaan xuquuqdooda, ay tahay wax aan la aqbali karin, iyadoo hadii ay damcaan inay noqdaan Booliis ama wariye wararka akhrisa la dilayo ama lagu sameyno cunsireyn ama bahdil.
Warbixintan ku aadan wadamada ugu horeeye tacadiga haweenka waxaa la soo bandhigay dhamaadkii sahan ama daraasad ay sameysay hay’adda TrustLaw oo hoos tagta Thomson Reuters Foundation oo ah farac ka mid ah wakaalada wararka Reuters oo qaabilsan wararka arimaha bini’aadamtinimada la xiriira.
TrustLaw ayaa cod ay ka qaadey 213 haween ah oo si weyn ugu xeeldheer arimaha gender-ka, kuwaasi oo ka kala socdey shanta qaaradood ee aduunka waxaa la su’aalay wadamada ugu horeeye ee lix qatar oo kala ah dhibaatooyinka caafimaadka, tacadiyada galmada & kuwa aan tacadiga aheyn, dhaqanka ama diimaha, u sinaan la’aanta khayraadka & waliba bini’aam isu gudbinta (trafficking)
Kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in wadanka Congo oo kaalinta labaad ku jira tacadiyada haweenka iyo ciidamada & maleeshiyaadka ay si toos ah u beegsanayaan nooc kasta oo ka mid ah haweenka oo ay ka mid yihiin gabdhaha kuwooda yar yar oo da’oodu tahay 3 sano & waliba haweenka da’da ah, waxaa la soo wariyey in marka la kufsanayo haweenka loo adeegsado hab arxan daran oo ah in lagu kala jeexo xubintooda taranka (macdanta) beynaad ama mindi, iyadoo la soo wariyey qaar kale oo markii la kufsadey xabad lagaga dhuftey xubinta taranka ama macdanta haweenka.
Dalka Pakistan oo kaalinta sadexaad galey waxaa la sheegay in dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqanka ah haweenka waxyeelo loogu geystey, iyadoo dhaqamada qabaa’ilka iyo wax lagu sheegay diin ahaan haweenka lagu waxyeeleeyey, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qasabka guurka, guurka yaraanta gabadha, dilka dhagaxa ee macsida, dilka loo yaqaan ilaalinta karaamada oo ah dil loo geysto hablaha guursada ragga aanay waalidkood la dooneyn gaar ahaan ay ku kala duwan yihiin diinta,
Divya Bajpai oo aqoonyahanad hanka caafimaadka isla markaana ka mid ah hay’adaha International HIV/Aids Alliance kana socotey wadanka Paksitan ayaa sheegtey in dhibaatooyinkaasi kor ku xusay ay u sii dheertahay haweenka Pakistaan, iyagoo qaarkood isdila ka dib markii ay dhibaato kala kulmaan guurkooda.
Wadanka Pakistan sanad kasta 1,000 haween & gabdho ah ayaa u dhinta dilka loogu magacdarey (honour killings) sida ay sheegayaan gudiga xuquuqda aadanaha Pakistaan ( Pakistan’s Human Rights Commission).
Hindiya sababta ay u kasbatey kaalinta afaraad ee wadamada ugu badan ee tacadiyada haweenka waxaa ugu weyn iyadoo dalka Hindiya sanadkii 2009-kii 100 milyan oo qof oo u badan haween & gabdho yar har loo safriyey si sharci daro ah.
Somalia ayaa kaalinta shanaad u gashay dhibaatooyinka hablaha kuwaasi oo ay ka mid yihiin gudniinka fircooniga, kufsiga, dhimashada xiliga umusha, helid la’aanta adeegyada caafimaadka, waxbarashada & khayraadka dhaqaalaha.
“Aad ayaan dhab ahaantii ula yaabay warbixintan, waayo waxaanba u haystey in Soomaaliya ay tahay wadanka koowaad ee tacadiga hablaha, maba ka fileyn kaalinta shanaad” sidaasi waxaa tiri Maryan Qaasim oo ah wasiirka haweenka ee dawlada KMG Soomaaliya.
“Dhibaatada ugu weyn ee haweenayda ku haysta Soomaaliya waa marka ay uur yeelato,xiligaasi nolasheedu waxay u dhaxaysaa 50-50, waayo ma jiro adeeg caafimaad oo daryeela, ma jiraan Isbitaalo & xarumo caafimaad oo dhameystiran oo lagu daryeelo haweenayda” ayay hadalkeeda raacisay Maryan.